Ifulethi elincane le-2 Bed For Sale E-Horsham, West Sussex
Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » West Sussex » Horsham » Horsham » Ifulethi elincane le-2 Bed For Sale E-Horsham, West Sussex1
United Kingdom, West Sussex, Horsham, Horsham, Rh12 1ee
Ikhodi Yokuposa: Rh12 1ee
Izici: Two bedroom ground floor apartment, Close to Station, Master bedroom with en suite, Close to Town, Allocated Parking, Modern style Kitchen
Ifulethi elihle elingaphansi komhlaba eliseduze neHorsham Station, maphakathi nedolobha nezitolo zendawo. Leli yithuba elihle kunoma yimuphi umthengi okokuqala ngqa noma ukuthenga ukuvumela abatshalizimali ukuthi bazibambele impahla enhle ngentengo enhle. Igumbi lokulala eliphezulu linegumbi lokugeza elinamakamelo aphezulu futhi ifulethi linikeze nezindawo zokupaka. Ngeminye imininingwane xhumana nathi namuhla.
Pinnacle Letting Company
28 Carfax, Horsham
, Rh12 1ee
IHorsham yidolobha lezimakethe ezingxenyeni ezingenhla zoMfula i-Arun onqenqemeni lweWeald eWest Sussex, eNgilandi. Idolobha liqhele ngamakhilomitha angama-31 (50 km) eningizimu-ntshonalanga yeLondon, ama-18.5 miles (30 km) enyakatho-ntshonalanga yeBrighton namakhilomitha angama-26 (42 km) enyakatho-mpumalanga yedolobha lesifundazwe iChichester. Amadolobha aseduze afaka iCrawley enyakatho-mpumalanga neHaywards Heath neBurgess Hill eningizimu-mpumalanga. Kuyisikhungo sokuphatha sesifunda saseHorsham.
Izikole eziseduzane Rh12 1ee